इन्द्रेणीमा कल्पना दाहाल र अलिफ खानले पहिलोपटक दोहोरी गाएपछि मिडियामा,दुइ बीच प्रेमको चर्चा चलेपछि – Onlines Time
महानायक’ विवाद चर्किँरहँदा उपाधिको पक्ष विपक्षमा बहस भयो । कतिले हमाल महानायकको हकदार रहेको भन्दै अभिव्यक्ति दिए । कतिले कुनै पनि कलाकारलाई यस्तो उपाधि दिन नहुने बताए । विवादकै कारण सामाजिक सञ्जालमा आएको टीकाटिप्पणीले डिप्रेसनको नजिक पुगेको दीपाले बताइन् । जे होस् यो विवाद अहिले सेलाएको छ ।
‘महानायक’ विवाद सेलाएको केही महिनामै ‘आरके इन्टरटेन्टमेन्ट’ले अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरलाई ‘महानायिका’ उपाधि दिएको छ । माघ २४ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ, अभिनेता राजेश हमाल र नीर शाहलगायतको उपस्थितिमा उनलाई ‘महानायिका’को ताज पनि पहिर्‍याइयो ।
‘महानायक’ उपाधिमाथि प्रश्न उठ्दा उठ्दै अर्को उपाधि किन आवश्यक पर्‍यो त ? आरके इन्टरटेन्टमेन्टका संस्थापक अध्यक्ष राम केसी करिश्माले लामो समय फिल्म क्षेत्रमा योगदान दिएकै कारण उपाधि दिएको तर्क गर्छन् । ‘हामीले यही क्षेत्रमा रहेका नीर शाह, शम्भुजित बास्कोटा र चलचित्र विकास वोर्डका सदस्यसँगको छलफलपछि उहाँलाई महानायिका घोषणा गरेका हौं,’ अध्यक्ष केसीले भने,’करिश्माले तीन दशकदेखि नेपाली फिल्म क्षेत्रमा टेवा पुर्‍याउनु भएका कारणले उहाँलाई यो पदवी दियौं ।’ संस्थाको ९औं वार्षिक उत्सवमा आफूहरुले राजेश हमाललाई ‘महानायक’ घोषणा गरेको उनको दाबी छ । राजेशले विदेश पलायन नभई फिल्म क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको आधारमा उपाधि दिइएको उनी बताउँछन् ।
‘महानायिका’ किन चाहियो त ? भनेर प्रश्न गर्दा अध्यक्ष केसीले जवाफमा भने,’फिल्म क्षेत्रको अग्रजलाई सम्मान गरेनौँ भने उद्योग धरासायी हुन्छ । यही क्षेत्रमा समर्पित भएर लागेका कलाकारलाई सम्मान गर्यो भने राज्यको ध्यान पनि जाने भयो । त्यसैले उहाँहरुलाई सम्मान गर्यौं ।’ उनी थप्छन्,’राष्ट्रिय खेलाडीलाई तलब छ । खोइ त कलाकारलाई तलबको व्यवस्था । ती कुरा सुनिश्चित गर्न हामीले उपाधिको घोषणा गरेका हौं ।’
जीवनभर हवाइजहाज चढ्न नपाएपछि…
March 23, 2021 onlinestime
८ बर्षिय सुप्रिम मल्ल र कल्पना दाहाल बिच चल्यो घम्सा*घम्सी । कस्ले जित्यो । Supreme Malla । Kalpana (भिडियो हेर्नुहोस)